कांग्रेस पदाधिकारी बैठकको निर्णय, सरकार बनाउन जसपा र एमालेको नेपाल समूहको सहयोग लिने
काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनको लागि जसपा र एमालेको माधव नेपाल समूहको सहयोग लिने निर्णय गरेको छ। बैठकपछि प्रतिक्रिया दिँदै कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले भने,"कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रयत्नलाई कसरी सफल बनाउने तयारी भएको छ। माओवादी केन्द्रको समर्थन छ। जसपालाई एकजुट गराएर यो अभियानमा सामेल गराउने र एमालेका नेपाल समूहबाट सहयोग जुटाउने प्रयास हुनेछ।"
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारीहरुको बैठक आज बस्दै छ । दिउँसो तीन बजे देउवाको निजी निवास बूढानीलकण्ठमा बस्ने बैठकमा सरकारमा सहभागी हुने मन्त्री छनोट र आसन्न महाधिवेशनबारे छलफल हुनेछ । हिजो बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा तत्काल परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त गर्ने सहमति भएको थियो । प्रधानमन्त्री देउवाले नेता डा. नारायण खड्कालाई परराष्ट्रमन्त्री बनाउने तयारी गर्नुभएको छ । […]
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठक आज बस्दैछ । पार्टी सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निजी निवास बूढानीलकण्ठमा बैठक बस्ने भएको हो। यसअघि हिजोका लागि तय भएको बैठक स्थगित भएको थियो। हिजो क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन सभापति देउवाले बुझेसँगै प्रतिवेदन अध्ययन गरी आगामी रणनीति तय गर्नुपर्ने भन्दै बैठक स्थगित गरिएको थियो । […] The post देउवा निवासमा कांग्रेस पदाधिकारी बैठक appeared first on RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal | Rajdhani Rastriya Dainik.
स्थगित भएको अधिवेशनको नयाँ मिति तोक्न कांग्रेस पदाधिकारी बैठक भोलि बस्ने
काठमाडौँ – स्थगित भएको अधिवेशनको नयाँ मिति तय गर्न कांग्रेस पदाधिकारी बैठक मंगलबार बस्ने भएको छ। शनिबार बसेको पदाधिकारी बैठकले भोलि (साउन १२) गते हुने वडा तहमको अधिवेशन स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो। केन्द्रीय महाधिवेशनबाहेक अरु तहको अधिवेशन सार्ने निर्णय गरेपछि नबसेको पदाधिकारी बैठक मंगलबार बसेर महाधिवेशनका बारेमा थप निर्णय गर्ने नेता गोपालमान श्रेष्ठले जानकारी […]
काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठक आज बस्दैछ । बैठक शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निजी निवास बुढानीलकण्ठमा बस्ने तय भएको हो । आजको बैठक कांग्रेस महाधिवेशन र क्रियाशील विवाद विषयमा केन्द्रित रहने मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा राख्ने गरिएको बैठकबारे तीव्र आलोचना भएपछि देउवा निवासमै बैठक बस्न लागेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव पौडेलले […] The post कांग्रेस पदाधिकारी बैठक बस्दै appeared first on RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal | Rajdhani Rastriya Dainik.
कांग्रेस पदाधिकारी बैठक बस्दैछ । बालुवाटारमा दुई बजे कांग्रेसको पदाधिकारी तथा पुर्व पदाधिकारीको बैठक बस्ने भएकाे हाे । बैठकमा महाधिवेशनको तयारी, सरकार संचालन, मन्त्रिपरिषद विस्तार लगायत विषयमा छलफल हुने प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले...
देउवाले बोलाए कांग्रेस पदाधिकारी बैठक, पार्टी महाधिवेशनका बारेमा छलफल हुने
काठमाडौं, असार २८ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कांग्रेस पदाधिकारी बैठक बोलाउनुभएको छ । मंगलबार दिउँसो पार्टी कार्यालय सानेपामा बस्ने गरी बोलाइएको बैठकमा पूर्व पदाधिकारीहरुलाई पनि निम्त्याइएको पार्टी कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ । बैठकमा महाधिवेशनको तयारी र निर्वाचन समितिले तयार पारेको निर्वाचन निर्देशिकामाथि छलफल हुने उहाँको भनाइ छ । भदौ १६–१९ […]
कांग्रेस पदाधिकारी बैठक अझै सुरु भएन
१८ असार, काठमाडौं । क्रियाशील सदस्यता छानविनका लागि मापदण्ड बनाउन बोलाइएको नेपाली कांग्रेस पदाधिकारी बैठक अझै सुरु भएको छैन । दिउँसो2बजेका लागि बोलाइएको बैठक पाँच बज्दा समेत सुरु भएको छैन । शीर्ष नेताहरुसहित पूर्वपदाधिकारी र क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिका सदस्यलाई पनि बोलाएको बैठकमा नेताहरु पार्टी कार्यालय सानेपामा आन्तरिक छलफलमै छन् । क्रियाशील सदस्यता […]
तयारी नपुगेको भन्दै कांग्रेस पदाधिकारी बैठक स्थगित
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको आज बस्ने भनिएको पदाधिकारी बैठक स्थगित भएको छ । क्रियाशील सदस्यता वितरणको मापदण्डलगायतका विषयमा छलफल गर्न आज २ बजे बस्नेगरी बोलाइएको बैठक स्थगित भएको हो । तयारी नपुगेको भन्दै स्थगित गरिएको बैठक शुक्रबार बस्ने जनाइएको छ । कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन भदौ १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौंमा सम्पन्न गर्ने गरी कार्यतालिका […]
कांग्रेस पदाधिकारी बैठक आज दिउँसो
कांग्रेस पदाधिकारी बैठक आज दिउँसो बस्ने भएको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानिलकण्ठमा बस्न लागेको बैठकमा संसद अधिवेशन आह्वान र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने विषयमा छलफल हुने एक नेताले...